Otu Ultimate Guide to Ichekwa ndabere na ekwentị mkpanaaka gị
Taa na ndụ, ọ ghọọ-agaghị ekwe omume na-ebi ndụ na-enweghị a ama na anyị smartphones juputara ozi dị mkpa. Ọbụna a echiche nke adịkwa data-eme ka anyị na-echegbu onwe. Gbochie nke ahụ ọdachi dịruru ná njọ nke adịkwa ọ bụla nke gị ozi site na mgbe nile akwado gị na ekwentị.
Ọ bụ mgbe mma nwere ihe karịrị otu akwụkwọ nke gị data, na nkwado ndabere bụ banyere edebe ihe niile dị mkpa data mma tinyere edebe mbipụta nke ihe ọmụma nile na i nwere ike mkpa oge ụfọdụ na-eme n'ọdịnihu. Gị ama chiri anya kegide onwe gị njirimara karịa gị na kọmputa bụ. Ya mere, kwado ya mgbe nile ma na-azọpụta onwe gị site na ihe niile kwere omume egwu. Ka ịghọta ụzọ dị iche iche n'ihi na ọrụ nkwado ndabere na mpaghara na ekwentị mkpanaaka data.
N'ihi na iOS Ọrụ --iCloud
N'ihi na Android Ọrụ --Google mmekọrịta
N'ihi na Symbian Users-- Symbian ngwá ọrụ
N'ihi na Blackberry Ọrụ --BlackBerry Desktọpụ Manager
Otu Kwụsị Ngwọta nkwado ndabere na mpaghara ekwentị
Ichekwa ndabere ihe iOS ngwaọrụ ichebe gị data dị mfe. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe nke na ngwaọrụ gị, ị nwere ike iweghachi ihe ọdịnaya gị ndabere. E nwere atọ isi ụzọ ndabere iOS ngwaọrụ. Otu bụ kpọmkwem site ngwaọrụ eji Apple si iCloud; nke abụọ bụ kpọmkwem gị na kọmputa na iji iTunes, na onye nke atọ bụ ngwakọ obibia nke ma nhọrọ.
Apple awade 5 GB nke free nchekwa na iCloud ma echegbula ị nwere ike nweta nkwalite ọzọ ichekwa site n'ịṅa a ego.
• 20 GB bụ maka $0.99 kwa ọnwa.
• 200 GB bụ maka $3.99 a ọnwa.
• 500 GB bụ maka $9.99 a ọnwa.
• 1 TB bụ maka 19.99 a ọnwa.
Aka iCloud ndabere, Gaa Ntọala ngwa iCloud ndabere. Banye iCloud na gị Apple ID na mgbe ahụ enweta ndabere Ugbu a na-amalite akwado usoro.
Mgbe ngwaọrụ gị bụ n'ime a Wi-Fi netwọk na ejikọrọ USB, ụdi backups na-akpaghị aka rụrụ. Ị pụrụ ọbụna aka amalite na-ewere ndabere site na ịme ọpịpị ndabere Ugbu a. iCloud bụ ihe ịtụnanya ngwọta maka ọrụ ndị na-adịghị mgbe nile jikọọ ha ngwaọrụ ha na kọmputa. Ọ na-achọ a Wi-Fi njikọ na USB ike ndabere gị data-akpaghị aka. iCloud awade a zuru ezu ndabere, otú ahụ ka onye ọrụ data bụ nchebe n'ụzọ ọ bụla. The iCloud ndabere gụnyere ihe nile gụnyere kọntaktị, kalenda, igwefoto mpịakọta, ntọala, na ngwa data. Nanị drawback na-ejedebeghị free nchekwa.
Google mmekọrịta bụ ọrụ na-abịa site Google na-ekedo niile nke gị data na ọmụma n'ime Google ilekota eji gị Google akaụntụ. Iji Google mmekọrịta ị nwere ike ndabere: App Data, kọntaktsị, kalinda, Chrome, Docs, Drive, Gmail, Google Opinion Ụgwọ Ọrụ, Google Fit, Google Play Akwụkwọ, Google Play Music, Google Play ọdụ akwụkwọ akụkọ, Google Play Movies & TV, Goolge +, Google+ Photos, Google+ Uploads, My egwu, Google Nọgidenụ, My GoogleDrive, Ndị mmadụ nkọwa, News & Weather, na aga-eme.
All n'ime ihe ndị a na-synced gafee iche iche ngwaọrụ nyere na ị na-aka na na otu Google akaụntụ gafee niile ngwaọrụ.
Ọ dị mfe guzobere. Melite, na-aga Ntọala Accounts Họrọ Google Họrọ Google Accounts -eme ka gị mmekọrịta selections.
Ndabere Wi-Fi okwuntughe na ndị ọzọ na ntọala, na-aga Ntọala ndabere & Tọgharia na mgbe ahụ na ịpị "ndabere m data" na-ahọpụta gị Google akaụntụ.
Ndabere nke ekwentị gị data na-adabere na ika nke handset na Symbian shei. The Nokia Ovi Suite emezu mkpa. Ọ bụ a zuru, akpaghị aka ndabere Suite site Nokia. Nanị na-ezighị ezi nke a software ọ bụ na-arụ ọrụ naanị na PC na Nokia igwe.
Iji ya - wụnye ụlọ na nkwụnye ahụ Nokia ekwentị na site na eriri, ma na-agbaso kpaliri. Ọ ga na-kọntaktị, kalịnda, ihe na media kwadoo. Non-Nokia Symbian ọrụ-Samsung ọrụ nwere ike iji a free ngwa akpọ The Symbian Ngwá Ọrụ. The Symbian ngwá ọrụ awade zuru image Detuo site na ekwentị gị na pụtara na ị nwere ike iweghachi ekwentị gị kpọmkwem na steeti ọ bụ na n'oge nke ndabere.
Blackberry Desktọpụ Manager bụ ewu ewu n'etiti Blackberry ọrụ. Na Blackberry Desktọpụ Manager, gị nwa Berry smartphone ndabere gị data dị ka gị kọntaktị, ozi, Kalinda, Profaịlụ Ntọala, wdg Bilie gị faịlụ kemfe na ihe ịga nke ọma mwube gị Blackberry ID na Blackberry App World.
Step1: Mbụ niile, wụnye ngwa.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, n'okpuru "ndabere," họrọ "Nhọrọ," (Na nhọrọ, ị nwere ike ezipụta izo ya ezo na data ụdị parameters)
Nzọụkwụ 3: Pịa "Back Up," na họrọ ebe maka gị ndabere. Ọ bụ otu faịlụ, n'ihi ya, ọ dị mfe atụfu na ihe mpụga ike disk mbanye, USB osisi ma ọ microSD kaadị maka nchebe nchekwa.
Voila! Nke a bụ ya. Ọ bụ nnọọ dị a atọ-nzọụkwụ usoro. Ọ dị mfe na ụzọ kasị mma ndabere gị blackberry data.
Wondershare MobileTrans Bụ 1-pịa ekwentị ndabere ngwa. Ọ nwere ike na-akwado nkwado ndabere na mpaghara Android, iOS na Symbian ngwaọrụ. Nkwado ndabere na mpaghara weghachiri ekwentị data effortlessly na a na-ghar ngwá ọrụ. Nyefee na kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, kalenda, photos, music, video na ngwa n'etiti - na otu onye dị mfe click!
Ndabere ekwentị mkpanaaka na ONE Click!
Detuo Ndi ana-akpo, SMS, Photos enweghị ihe ọ bụla Loss.
-Akwado ihe 3,500+ Popular Devices & ọhụrụ sistem.
Ndabere gị data si Old ekwentị ma weghachi ka New ngwaọrụ mgbe e mesịrị.
Nyefee ọdịnaya n'etiti iOS, Android, Symbian na Blackberry.
Na-akwado ka permantly ichicha ochie igwe.
Nzọụkwụ na ndabere ekwentị Data ka Kọmputa:
Step1: Wụnye MobileTrans na kọmputa gị na-agba ọsọ. Na-agba ọsọ ngwa mgbe gị iOS, Android, ma ọ bụ Nokia jikọọ ekwentị na kọmputa na eriri USB.
Step2: Na Home NchNhr, họrọ ndabere nhọrọ ẹkedori ndabere Panel. Ego niile data na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara pịa Malite Detuo. The MobileTrans ga-amalite ndabere họrọ ọdịnaya na kọmputa. Ị nwere ike wee chekwaa ndabere data na gị chọrọ ọnọdụ na-eji ya n'oge ọ bụla.
> Resource> Top List> ihe kacha ndu akwado gị Mobile Phone